Britain Inoti Haisi Kuzovhundutsirwa paNyaya yeZvirango
Zanu-PF inoti zvirango zvikasabviswa haisi kuzotaurirana neMDC pane zvasaririra muGPA.
Britain inoti haisi kuzovhundutsirwa kuti ibvise zvirango zvayakatemera mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nevamwe vavo kusvika vatevedzera zviri muchibvumirano cheGlobal Political Agreement, kana kuti GPA.
Sachigaro wekomiti yedare reHouse of Commons munyaya dzekudzyidzana nedzimwe nyika muBritain, VaMalcom Bruce, vanoti Britain ichakurudzira European Union, EU, kuti irambe yakasimbisa zvirango izvi kusvika GPA yatevedzwerwa.
EU iri kutarisira kuzeya nyaya yezvirango musi wa20 Kukadzi. Asi Zanu-PF iri kusimba nerokuti zvirango izvi zvinofanira kutanga zvabviswa isati yapedza misariridzwa yeGPA iyi. VeMDC vanotiwo Zanu-PF yave kutadza kutevedzera zviri muGPA kuburikidza nekushungurudza nhengo dzayo.
KuMt Darwin kunonzi kwakasungwa nhengo dzeMDC gumi neimwe dzaiita musangano wekuzeya nyaya yekunyorwa kwebumbiro idzva remitemo.
Bepanhau reHerald ratangawo zvakare kuburitsa nyaya dzekunyomba mutungamiri weMDC, VaMorgan Tsvangirai, izvo zvava kupa kuti muhurumende muite zinyenyenyeke.
Vane ruzivo nezviri kutika vanoti vakaoma musoro muZanu-PF ndivo vari kukonzera kuti muhurumende yemubatanidzwa muite kusawirirana kwakanyanya.
VaMsekiwa Makwanya vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika. VaMakwanya vanoti zvakakosha kuti hurumennde yeBritain iite hurukuro neZanu-PF panyaya iyi.